vendredi, 11 mai 2018 21:47
Mahafaly Solonandrasana Olivier: “Ny filoham-pirenena no tompon’ny teny farany”
Nilaza ny Praiminisitra raha nitafa tamin’ny mpanao gazety, androany, taorian’ny niatrehany ny lanonana ara-pitsarana nametrahana amin’ny toerany ny filoha voalohan’ny Fitsarana an-tampony fa “Ny filoham-pirenena no tompon’ny teny farany satria voafidim-bahoka tamin’ny fomba demokratika izy".
Navoitrany fa "tsy mitsahatra na ny filoham-pirenena na ny tomponandraikitra rehetra mitady ny fomba hitadiavana marimaritra iraisana satria, tsy hisy afaka hitompo teny ho manana ny marina tanteraka, koa aoka samy hanana fanetren-tena amin’ny fitadiavana izay vahaolana tena mahasoa ny firenena.”
vendredi, 11 mai 2018 21:25
Fitsarana an-tampony: Fihanianana sy fametrahana ny filoha voalohany
Notontosaina androany 11 mey 2018 tetsy Anosy ny lanonana ara-pitsarana nandraisana ny fihanianana sy nametrahana ny filoha voalohan’ny amin’ny Fitsarana an-tampony, Rajaona Andriamanankiandriana, izay voatendry nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 27 febroary 2018.
vendredi, 11 mai 2018 20:50
Fianarantsoa: Manamafy ny fitakiana ny Vovonana sendikaly eto an-toerana
Nahazoana alalana tamin'ny Prefen'i Fianarantsoa ny fivoriana sy ny fitokonana tanterahan'ny Vovonana sendikaly ao amin'ny fampianarana, hivondronan'ny ANEFA, CNM, SEMPAMA, SEMPAMA NOSY, eto Fianarantsoa. Fepetra notakiana tamin'izany ny fanaovana ny fihaonana anaty toerana voafefy fa tsy an-kalamanjana.
Ny Foibe-paritry ny Fanabeazam-pirenena eto no nanome efitrano malalaka ahafahana manatontosa izany. Milamina tsy misy korontana ny fivoriana.
vendredi, 11 mai 2018 20:28
Toamasina: Vary efa simba sy lo nosivanina saika hamidy
Misy vary lo sy efa simba nosivan'ireo mpiasana mpandraharaha indiana mpanafatra vary tratra tao Androranga omaly alakamisy.
Miisa 2.776 gony izy ireto ary saika vary "moto rice" avokoa. Ny nahagaga dia misy Polisy miandry ireto mpiasa sy ilay magazay, nefa tsy mba nanao tatitra tamin'ny lehibeny ny fisian'izany izy ireo, ny mpanao gazety nanao ny asany indray aza no norahonan'izy ireo.
Efa eo am-pelan-tanan'ny Zandary mitarika ny "Task Force" ny fanadiadiana ny raharaha. Mpiasa 44 sy ireto Indiana 02 tompon'ny vary no nosamborina.
vendredi, 11 mai 2018 20:23
Grand pavois Mahajanga: Mpanendaka niharan'ny fitsaram-bahoaka avy eo natsipy tany anaty ranomasina
Tsy namelan'ny Fokonolona intsony rehefa ela nitoratorahana ity lehilahy iray ity. Mpanakan-dalana gaigilahy izy ireto ary manendaka izay olona sendra azy.
Efa maro ireo olona mpivahiny amin'ireny trano fandraisam-bahiny manodidina an'Amborovy ireny no lasibatra sy nametraka fitarainana.
Tratra am-bodiomby izy nony farany, teo ampanaovana ny asa ratsiny omaly alakamisy ary nifanenjehan'ny Fokonolona. Maromaro izy ireo no mpanao ity asa ratsy ity saingy izy no tratra farany.
Olona mipetraka eny amin'ny tanana antsoina hoe Bongo eny amin'ny Fokontany Amborovy ihany izy ireto.
vendredi, 11 mai 2018 19:33
Antsirabe: Tsy nandray olona ny Domaine androany
Niveri-maina ireo olona maro nanan-draharaha teny amin'ny Domaine androany. Tsy nisy fanazavana mazava ny antony.
Omaly dia nisy fanambarana novakiana tamin'ny TVM/RNM milaza fa tsy manaiky ny faneriterena azy ny mpiasan'ny Ministera eo anivon'ny Fiadidiana ny Repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, fanajariana ny tany ary ny fampitaovana (M2PATE), fa miasa daholo manerana ny Nosy.
Tsy izay no nitranga teto Antsirabe na dia sampandraharaha eo ambany fiahian'ny M2PATE aza ny Domaine.
vendredi, 11 mai 2018 19:32
Avis n°02-HCC/AV du 11 mai 2018 relatif à une demande d’avis sur la signification du Considérant 27 et de l’article 4
vendredi, 11 mai 2018 13:09
Fianarantsoa: Mahomby ny asan'ny andrimasom-pokonolona
Tratra tao anatin'ny adiny roa sy sasany ny omby nangalarin'ny dahalo tao Ankamorilava Ambodikavola, Kaominina renivohitr'i Fianarantsoa. Ny alin'ny alakamisy hifoha zoma 11 mey ity no nitrangan'izany.
Noroahin'ny dahalo nianatsimo andrefana ireo omby miisa 6 sy nanaovan'ny Fokonolona koka sy fanarahan-dia. Avy hatrany dia namonjy ireo kizo sy lalana mazava ny andiana polisy avy ao Idanda sy ny FIP.